Ngaba kuyinyaniso ukuba i-backlinks yangoku igolide yegolide?
I-backlinks engqinelanayo mhlawumbi iyona nto ibalulekileyo ngokubhekiselele kwisakhiwo soqhagamshelwano kwi-Search Engine Optimization (SEO). Into yokuba akuzona zonke ikhonkco ezidalwe zilinganayo-zibeka nje, iinjongo ezinkulu zophando (njenge-Google ngokwalo, kunye ne-Yahoo kunye ne-Bing) zinika ubunzima kwiintlobo ezithile ze-backlinks. Phakathi kwamanye, i-backlinks yangaphakathi efunyenwe kwikhasi lasekhaya lakho lewebhu shishini okanye iblogi yayiya kuba yizona ziqhagamshelaniso ezibalulekileyo kunye namandla enje ngeenjongo ze-SEO.
Ngoko, ulungile-i-backlinks yangoku iyakubonwa njengamathuba okwenene egolide. Abanye abantu bababiza ngokuba "iGrail engcwele ye-SEO. "Kutheni baxabiswa kakhulu? Kalula nje ukuba uphakathi kwalabo abafuna igunya lewebhusayithi okanye iblogi ukuba likhule ekuthandeni - olu hlobo lwezonxibelelwano yile nto kanye kufuneka ufumane inkqubela phambili.
Yintoni eyenza i-Backlinks yangaphakathi ngeNgcaciso?
Ukuqwalasela lonke ixesha elide laseKhaya I-backlink ye-Contextual kwi-scale, makhe sizame ukuphulaphula igama ngelizwi ukuqonda okungcono. Okokuqala, i-Homepage iyimifanekiso ekhethekileyo yephepha lewebhu ehambisa indlela yokuphequlula umxholo kuyo yonke indawo okanye iblogi. Okwesibini, Isiqulatho sezonxibelelwano sithetha ukuba kufuneka sifumaneka ngokubanzi ngaphakathi kwiphepha lekhasi-kubonakala kwimibhalo yombhalo ngokusemthethweni, i-backlinks yangaphandle ayishiyi indawo yaluphi na uluhlu lwe-spammy lwamabhasi amancinci amancinci afunyenwe kwindawo. Okwesithathu, i-backlink kwi-SEO imele ikhonkco yangaphandle (ngaphandle koko, ikhonkco elingaphakathi) efumaneka kwiwebhsayithi yesithathu okanye iblogi kwaye ibhekise kumaphepha akho.
Basebenza njani kwi-Homepage?
Ukususela kwimbono yokukhuthaza i-SEO, i-backlinks yomxholo ehla ngqo ngqo kwikhasi lasekhaya zizinto eziphambili eziqhuba yonke inkqubo ye-intanethi ye-website okanye yeblogi yokukhangela kwi-intanethi kwinqanaba. Into kukuba yonke into malunga nokusebenza kwabo kwi-SEO ilula kakhulu - i-backlinks yeemeko ihlala iphezulu kwibhodi kwiGoogle, kuba iveliswe ngokwemvelo kwinqulatho kwaye ijonge. Ngethuba elifanayo, ukuba kunjalo ukuba i-backlink yeemeko zendalo zidalwe kwiphepha lewebhu lewebhu okanye iblogi ibanika ubunzima obukhulu. Ngoba? Kalula nje ngokuba ufike kwikhasi lasekhaya, ezo zikhokelo zangoku ziza kuqhuba i-traffic yewebhu - kukho enye iphepha lasekhaya, "isango" elidlulileyo ngalo lonke umsebenzisi ovakashela iwebhusayithi okanye iblogi ukufikelela kumxholo kuwo onke amaphepha.
Ekugqibeleni, gcinani engqondweni ukuba yonke into malunga nezikhonkwane zekhasi lasekhaya ziza kusebenza kuphela kwizikhundla ezigunyazisiweyo kunye namaphepha ewebhu nge-PR ephakamileyo.Ndiyathetha ukuba i-backlink nganye yeemeko inomthwalo ongeyonto nje kuphela ekubeni ifike ngqo kwikhasi lasekhaya, kodwa ngenxa yokuba yonke iwebhusayithi (okanye iblogi) ibalulekile kwaye Source . Ngoko ke, yiyiphi ixabiso eliyintloko elifunekayo ukuze ufumane uninzi lwe-backlinks yakho yangaphakathi - kunye nekhasi elilodwa lasekhaya ngokwalo, okanye mhlawumbi i-website yonke ethathwe kwinqanaba? Bobabini!